Kala tagga lamaanaha | Suomen Mielenterveysseura
”Caruurtu waxaa laga yaabaa inay si xooggan uga ficil celiyaan kalatgga kadib, haddii kalatagu lahaa ismaandhaaf weyn ama mid waalidka ka mid ahi faraha kalabaxo nolosha caruurta”
Caruurta waa in laga badbaadshaa iskhilaafka u dhexeeya lamaanaha. Waa muhiim, in waalidku la yimaadaan wadashaqeyn dhexdooda ah, sababtoo ah xidhiidhka wanaagsan ee caruurta, barbaarinta wadajirta ee waalidka iyo jawi ku dheehan jacayl caruurta way caawisaa. Furniinku wuxuu ka takhalusaa guurka, laakiin qoyska ama waalidnimada kama takhaluso.
Akhri weliba warbixinta ku saabsan caruurta iyo kala taga iyo weliba ka tegida caruurta bogga Väestöliito iyo Mannerheimin lastensuojeluliito.
Tiiraanyada kala taga iyo lafagurkeedu waxay qaadan kartaa muddo dheer
Tiiraanyada kala tagu waa caadi, waxayna qaadataa waqtigeeda. wax waayida waa loo tiiraanyoodaa. Akhri weliba murugada. Dhammaanshaha xidhiidhka muddada dheer ee lamaanaha wuxuu u baahan yahay aqoonsasho cusub in la dhiso iyo muddada marxalada tiiraanyada si tartiiba looga gudbaa wixii hore oo jiho cusub la qaado.
Xidhiidhka muddada dheer ee dadka waxa laga yaabaa inuu abuuro is aqoonsasho adag oo ah xidhiidhka lamaanaha. Dhammaanshaha xidhiidhku wuxuu keeni karaa in laga fekero, runtii waa kuma, maxay tahay heerka bulshada gudaheeda iyo muxuu yahay xidhiidhka dhanka saaxiibada. Marka dambe khibrada laga dhaxlo kala taga waxay u muuqan kartaa fursad cusub oo awood ah, sida in wax kasta oo mashaakilaadka kale ah ama dhibaatadaba laga bixi karo.
”Waxaan wada soconay muddo sanado ah aniga iyo xaaskaygu, ka hor intaanan kala tegin. Marka hore waxaan dareemayey, in aanan ka bixi karin. Waxba kama xusuusto xataa waagii aan keliga ahaa. Waxaan dareemay xataa inay igu adag tahay inaan barto isticmaalka ereyga ’aniga’ ee aanan odhan ’anaga’. Si kataba ha ahaatee waxaan ogaadey inaan ka gudbayo. Nolosha waqtigan xaadirka ah waxaan dareemayaa inay aad u fiican tahay oo marmar waxaan ku fekeraa xidhiidh cusub, inkastoo laga yaabo inay goor hore tahay.”
Dareenka diidmada ah ee uu kala tagu keeno waxay noqon karaan kuwo culus, oo maareynta kala tagu uu noqdo mid cakiran. Taasi waxay u muuqan kartaa mid cadho badan leh, eedaynta joogtada ah ee xaaskaagii hore ama dareenka xoogan ee cabsida iyo guul daradda leh, taas ayaa keenta badanaa hor istaagida ka dhexdhalata xidhiidhka dadka ama in uu sii socdo xidhiidhkoodii hore. Xalinta arrintan waxaa habboon in caawimaad la raadsado reerkoo dhan ayaa u baahnaan kara caawimaad hadii furitaan yimaado.
Dhibaatada qoyska waxaa caawimaad laga heli karaa tusaale ahaan xarumaha la talinta qoyska. Magaalooyinka qaar xarumaha la talinta qoysaska ama la talinta xidhiidhyada kale ee lamaanaha taas oo ay tegi karaan qoysaska ilmaha leh oo keliya. Hadii qoyskiinu uusan lahayn caruur ama sabab kale awgeed aadan u tegi karin la talinta qoyska, waxay noqonaysaa in aad keli u xalisataa ama lamaanuhu tusaale ahaan ay u tagaan shaqaalaha heeganka dhibaatooyinka. Xarumaha ka wada sheekaysiga arrimaha qoyska ee kaniisada kooxda furitaanka ayaa qabanqaabiya iyo wada sheekaysiyo kale ee dadka is furaya.
Sidoo kale telefoonka guud/qaran ee dhibaatooyinka waxaad uga hadli kartaa arrimaha la xadhiidha furitaanka.
Eroretki.fi-palvelussa waxaad uga baaraan degi kartaa xaaladahaaga la xadhiidha furitaanka iyo caruurta.
Caawimaad iyo warbixino xaaladaha furniinka:
Neuvokeskuksen Vanhemman opas
Xarumaha Kaniisadaha talosiinta arrimaha qoyska
Bogga internetka ee loogu talo galay ardayda ee qaabilsan dhamaanshaha xidhiidhka lamaanaha maareynta dareenada la xidhiidha waxaad ka heleysaa bogga Nyyti ry.